ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာဂျေအာရ်၏ | The Great and Terrible Gd - Part III | Real Conversion
ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်သောဘုရား အပိုင်း(၃)
၂၀၁၂၊ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ ၁၂ရက်နေ့၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌၊ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“ကြီးမြတ်၍ ကြောက်မတ်ဖွယ်သောဘုရား” (နေဟ ၁း၅)။
“အလွန်ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်”(ဒံယေလ ၉း၄)။
ဤဒေသနာတော်ကို ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် ရေးသားတင်ဆက်သော “ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား” ဟူသော ဒေသနာတော်မှ ကိုးကားဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (Sword of the Lord, 1977, pp. 7-38).
နေဟမိမှတ်စာနှင့် ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်းတော်မြတ်၌ ဘုရားရှင်သည်ကြောက်ရွှံ့ဖွယ် ကောင်းသောဘုရားဟူ၍ မိန့်ဆိုထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်လျှောက်လုံး၌ ဘုရားရှင် သည် ကြီးမြတ်၍ ကြောက်မတ်ဖွယ်ဘုရားဖြစ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိူင်ပါသည်။ ဘုရားရှင်သည် မေတ္တာတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ဟောကြားခြင်းသည် အမှန်တရားသက်သက်မဟုတ်နိုင်ပါ။ ထိုအရှင်သည် တရားစီရင်သောအရှင်နှင့် လက်စားချေသောဘုရားသခင်လည်း ဖြစ်တော်မူသည်။ “အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏လက်တော်သို့ ကျရောက်ခြင်းအမှုသည် ကြောက်မက်ဖွယ် သောအမှုဖြစ်သတည်း” (ဟေဗြဲ၁ဝး၃)ဟူသော တရားဒေသနာတော်ကို ယနေ့သင်းအုပ်ဆရာတို့ဝေ ငှခဲယဉ်းလှပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကြောက်မက်ဖွယ်သောဘုရားဟူ၍ ဟောကြားခြင်းမရှိသောသူသည် ကိုယ်စားပြုအစေခံခြင်းမဖြစ်နိုင်ပေ။ ထိုအရာသည် ဘုရားရှင်၏ဂုဏ်တော်ကို မျက်ကွယ်ပြုစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသည် အသစ်ထဲသွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပရောဖက်ယေရမိ၏ ဘုရားပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“ဤလူမျိုးသည် ပြစ်မှားပုန်ကန်သောသဘောရှိ၍၊ အစဉ်ပုန်ကန်တတ်ကြ၏။ အချိန်တန်မှအရင်မိုးနှင့် နောက်မိုးကိုရွာစေ၍ အသီးအနှံသိမ်းမြဲသိမ်းရာကာလကို ငါတို့အဖို့ သိုထားတော်မူသောငါတို့၏ ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရားကို ယ္ခုကြောက်ကြ ကုန်အံ့ဟု သူတို့သည်စိတ်နှလုံးသားထဲ၌ မဆိုတတ်ကြ။ (ယေရမိ ၅း၂၃-၂၄)။
ထိုခေတ်ကာလ၌လည်း ဘုရားသခင်ကိုယ်စားပြု အစေခံခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။ ထိုသို့သောသူတို့က ယေရမိအား ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“ပရောဖက်မှစ၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်ရှိသမျှတို့သည် မုသာကိုသုံးကြ၏၊ ချမ်းသာမရှိသော အခါ၊ ချမ်းသာ၊ ချမ်းသာဟုပြောဆိုလျှက်”၊ (ယေရမိ ၆း၁၃-၁၄)။
“ပညာရှိတို့သည်အရှက်ကွဲကြ၏၊ ထိတ်လန့်၍ ကျော့ကွင်းထဲသို့ဝင်ကြပြီ။ ထာ၀ရဘုရား ၏နုတ်ကပတ် တော်ကိုပယ်ကြပြီ၊ သူတို့၌ပညာမည်မျှရှိသနည်း။ ပရောဖက်မှစ၍ ယစ်ပု ရောဟိတ်ရှိသမျှတို့သည် မုသာကိုသုံးကြ၏။ ချမ်းသာမရှိသောအခါ ချမ်းသာ၊ ချမ်းသာ ဟုပြောဆိုလျက်” (ယေရမိ ၈း၉-၁၁)။
“သူတို့ကို ငါရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးမည်။ စပျစ်နွယ်ပင်၌စပျစ်သီးမရှိရ။ သဘောFသဖန်းပင်၌ သဘောFသဖန်းသီးမရှိရ။ အရွက်လည်းညှိုးနွမ်းရမည်အကြောင်း လွမ်းမိုးသောသူတို့ကို ငါစေလွတ်မည်ဟု ထာ၀ရဘုရားမိန့်တော်မူ၏” (ယေရမိ ၈း၁၃)။
“ထာ၀ရဘုရားမိန်းတော်မူသည်ကား၊ ဤပြည်၌ဓားဘေး၊ မွတ်သိပ်ခြင်းဘေးမရှိရဟု ငါမစေလွတ်ဘဲ၊ ငါ့နာမကိုအမှီပြု၍ ကိုယ်သဘောအလျောက်ဟောပြောသော ပရောဖက် တို့သည်ဓားဘေး၊ မွတ်သိပ်ခြင်းဘေးဖြင့် ဆုံးရကြလိမ့်မည်။ သူတို့၏တရားနာ၊ ပရိ သတ်တို့သည် ကိုယ်တိုင်မှစ၍ မယား၊ သားသမီးတို့နှင့်တကွ မွတ်သိပ်ခြင်းဘေး၊ ဓား ဘေးကြောင့် ယေရုဆလင်မြို့ လမ်းပေါ်သို့ပစ်ချခံရ၍၊ အဘယ်သူမျှမသင်္ဂြိုလ်ရ။ သူတို့ ၏အပြစ်ကို သူတို့ပေါ်သို့ငါသွန်းလောင်းမည်”။ (ယေရမိ ၁၄း၁၅-၁၆)။
ဆိုးသွမ်းသော ယနေ့ခေတ်ကာလ၌၊ အဘယ်မည်သောတရား ဟောပလ္လင်ထက်၌ ထိုသို့သော တရားဒေသနာတော်ကို ကြားရကြမည်နည်း? ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်ကောင်းသော ယေရမိ၏ ဘုရားသခင်၏ စီရင်ရာနေ့ရက်နီးကပ်လာပြီဟူသော တရားဒေသနာတော်ကို မည်သည့်တရားဟော ဆရာထံက ကြားရကြမည်နည်း? တရားဟောဆရာတို့သည် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဖြောင့် မတ်ခြင်း၊ ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်ကောင်းသော ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို မဝေငှသက်သေမခံသော် လည်း ထိုဘုရားသခင်သည် အစဉ်တည်တော်မူ၏။
“အို ယုဒရှင်ဘုရင်များနှင့် ယေရုဆလင်မြို့သားများတို့ ထာ၀ရဘုရား၏အမိန့်တော်ကို နားထောင်ကြလော့၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာ၀ ရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သတင်းကြားသူတိုင်း နားခါးသည့်တိုင်အောင်ငါသည် ဤ အရပ်၌ ဘေးရောက်စေမည်” (ယေရမိ ၁၉း၃)။
တနေ့ညနေခင်း၌ ကျွန်ုပ်သည်ရေအောက်ပိုက်များရှိသည့် ရေချိုးကန်၌ရှိနေခဲ့သည်။ လူတစ်ဦးသည်လာ၍ အဘယ့်ကြောင့် အမေရိကန်နိူင်ငံသည် ဒုက္ခပေါင်းစွာတွေ့ကြုံရပါသနည်းဟု ကျွန်ုပ်အားမေး၏။ ကျွန်ုပ်လည်းတုန်းဆိုင်းမနေဘဲ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် “ကျွန်ုပ်တို့သည်ငါး ဆယ်လေးသန်းလောက်သော ကလေးများကို သတ်ဖြတ်၍ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံဒုက္ခ နှင့်ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်ကင်း၍ လူမမည်ကလေးသူငယ်ပေါင်းများစွာ သတ်ဖြတ်နေ သောအမေရိကန်နိူင်ငံအပေါ် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တည်နေခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဟောဆရာများ လည်း စစ်ပွဲကြောင့် များစွာသေကြေပျက်စီးခြင်းဘေးမှ လွတ်မြောက်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြဘူး” ဟူ၍ ဖြေကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံအပေါ် ဘုရားရှင်အမျက်တော် သွန်းလောင်းမည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်ပြောသမျှ၌ သင်လည်း သဘောတူလက်ခံပါလိမ့်မည်။ ယေရမိပြော ကြားခဲ့သည် မှာ၊
“မိဘမရှိသောသူ မုဆိုးမတို့ကိုမတရားသဖြင့်မပြု မညည်းဆဲကြနှင့်၊ အပြစ်မရှိသော သူတို့ကို ဤအရပ်၌မကွပ်မျက်ကြနှင့်” (ယေရမိ ၂၂း၃)။
“သို့မဟုတ် သင်တို့သည် ဤအမိန့်တော်ကိုနားမထောင်ဘဲနေလျှင်၊ ဤနန်းတော်သည် လူဆိတ်ညံသောအရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ငါထာ၀ရဘုရားကိုယ်ကိုတိုင်တည်၍ မိန့်တော်မူ ၏၊ ယုဒရှင်ဘုရင်၏ နန်းတော်ကို ထာ၀ရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်သည်ငါ၌ဂိ လဒ်အရပ်ကဲ့သို့၎င်း၊ လေဗနုန်တောင်ထိပ်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သော်လည်း အကယ်စင်စစ်ငါ သည်သင့်ကို လူမနေသောမြို့ကဲသို့တောဖြစ်စေမည်။ (ယေရမိ ၂၂း၅-၆)။
“အစဉ်အမြဲမလျှော့နိုင်သော ထာ၀ရကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့် အရှက်ကွဲခြင်းကို သင်တို့အပေါ်မှာ သက်ရောက်စေမည် (ယေရမိ ၂၃း၄၀)။
ယနေ့၊ နေ့ရက်ကာလ၌ ယေရမိ၏ဘုရားသခင်က အမေရိကန်ကို ထိုကဲ့သို့ မိန့်တော်မူပြီဖြစ်သည်!
လူမျိုးနွယ်ထုတစ်ခုလုံးအပေါ် နောဧ၏ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့ ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွှံ့ဖွယ် တရားစီရင်သောဘုရားဖြစ်သည်။ ဣသရေလတို့၏ အပြစ်များပေါ် ထိုသို့ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ် သောအာဗြံဟံ၏ဘုရားသည် တရားစီရင်ခဲ့သည်။ ဣသရေလတို့အား ဗါဗုလုန်လက်အောက်သို့ ကျွန်ုပ်ဘ၀ကျရောက်မည်ကို ထိုသို့ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်သော ယေရမိ၏ဘုရားရှင်သည် မိန့် ဆိုခဲ့ပါ သည်!
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဣသရေလလူတို့သည် ဘုရားရှင်ရွေးကောက်ထားသော လူမျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဣသရေလလူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့်ထိတွေ့သူများဖြစ်ကြပါ သည်။ ထိုလူမျိုးသာလျှင် မြေကြီးပေါ်က ဘုရားသခင်ရွေးကောက်သောအမျိုး ဖြစ်ကြပါသည်။ (ကမ္ဘာ၁၂း၁-၃) ဘုရားရှင်သည် ခါနန်ပြည်ကိုထိုသူတို့အစဉ်အမြဲ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထိုသူတို့အားဘုရားရှင် မိန့်တော်မူသည်မှာ၊ “အကယ်စင်စစ် ထာ၀ရမေတ္တာတော်နှင့်သင့်ကို ငါချစ်၏” (ယေရမိ ၃၁း၃)။ ဣသရေလလူတို့သည် ဖေါက်ပြန်ကြသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား “ငါသည်ကိုယ်အဖို့ သင့်ကိုအစဉ်အမြဲသိမ်းယူမည်။” (ယေရမိ ၃း၁၄၊ ဟောရှေ ၂း၁၉)၌ဖေါ်ပြမိန့် တော်မူပါသည်။
ဣသရေလလူတို့၏ အပြစ်ပေါ်ဘုရားရှင်၏စီရင်ခြင်းသည် တခါတလေကျွန်ုပ်တို့အား ကြောက်လန့်စေပါသည်! ကာဒေရှအရပ်၌ ဣသရေလလူတို့သည် ဘုရားသခင်အပေါ် သံသယပွါး ခဲ့ကြသည်။ ယုံကြည်ခြင်းမရှိသော သူလျှိုတို့၏ စကားကိုနားထောင်၍ ကတိတော်တိုင်းပြည်သို့မ သွားလိုကြပေ။ ထို့နောက်ဘုရားရှင်သည် ထိုသူတို့အားသဲကန္တာရ၌ ဆက်လတ်ပြီးလှည့်လည်စေလျှက် ဆန့်ကျင်ပုံကန်သောသူတို့ကို သူသဲကန္တရ၌သေဆုံးစေခဲ့သည်။ မယုံကြည်သောသူတို့ ဆုံးပါးသွားပြီး နောက် ထိုသူတို့၏သားသမီးများကိုသာ ကတိတော်ပြည်သို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူချစ်သောသူတို့ အပေါ် ထာ၀ရဘုရား၏တရားစီရင်ခြင်းသည် လျှိူ့ဝှက်စွာအပြစ်မကျူးလွန်ရန် သတိပေးခဲ့သည်!
ရွှေနွားရုပ်ကို ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုကြပြီးနောက် ဘုရားရှင်သည် လူပေါင်း၃၀၀၀ကို အသေတရား စီရင်ခဲ့ပါသည်။ သဲကန္တာရတောထဲ၌ သူတို့သည်ဘုရားရှင်ကို အော်ဟစ်မြည်းတမ်းခဲ့ကြသည်။ “တဖန်လူများတို့သည် အလိုတော်မရှိသော မြည်တမ်းခြင်းကိုပြုကြသဖြင့်၊ ထာ၀ရဘုရားသည် သူတို့စကားကိုကြား၍ အမျက်ထွက်တော်မူ၏။ ရှို့တော်မူသော မီးသည်သူတို့တွင်လောင်၍၊ တပ်အ စွန်း၌ရှိသော သူအချို့တို့ကိုသေစေလေ၏” (တောလည်၁၁း၁)။ သူတို့သည် အစားအစာကိုတောင်း သောအခါ၊ မန္နမုန့်ကိုချပေးပြီး၊ အသားကိုတောင်းသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် အမျက်ဒေါသထွက် လျှက် မြောက်များစွာသော ငုံးသားကိုချပေးတော်မူ၏ “သို့ရာတွင် ငုံးသားကိုကိုက်၍ မဝါးမှီ ထိုထာ ၀ရဘုရားသည် သူတို့ကိုအမျက်တော်ထွက်၍ အလွန်ပြင်းသောဘေးနှင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူ၏” (တောလည် ၁၁း၃၃)။ အမျက်တော်သည် ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွှံ့ ဖွယ်တကား!
ကောရ၊ ဒါသန်နှင့်အဘိရံတို့သည် မောရှေနှင့်အာရုန်တို့ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားရှင်ကမောရှေအား ထိုသူတို့ကို မိမိတို့အမျိုးသားချင်းထဲက ထုတ်ပယ်ရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါမြေကြီးသည် ကွဲ၍မိမိခံတွင်းကိုဖွင့်လျှက် ထိုသူတို့ကိုမျိုလေ၏။ “ထိုသူတို့သည် ကိုယ်တိုင်မှ စ၍ ဆိုင်သမျှသောသူတို့နှင့်တကွ၊ အသက်ရှင်လျှက် သေမင်းနိုင်ငံသို့ဆင်းသက်၍ သူတို့အပေါ်မှာ မြေစေ့ပြန်သဖြင့် သူတို့သည် ပရိသတ်မှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြ၏ (တောလည်၁၆း၃၃)။ ထိုတရားစီ ရင်ခြင်းအပေါ် အော်ဟစ်မြည်တမ်းကြသောကြောင့် ဘုရားရှင်သည် ၁၄၇၀၀သော သူတို့ကိုသေစေ လေ၏! ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်သော ဘုရားသည်အပြစ်ကိုရွှံ့မုန်းသဖြင့် အပြစ်ကိုအစဉ်တရားစီ ရင်သော ထာ၀ရဘုရားဖြစ်ပါသည်!
တဖန်၊ ဣသရေလလူတို့သည် မန္နမုန့်ကိုစားကြ၍ မြည်တမ်းညည်းတွားကြလေ၏။ “ထိုအခါ ထာ၀ရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးတို့တွင် မီးမြွေများကို စေလွှတ်တော်မူ၍ လူများစွာကိုက်ခံရသ ဖြင့်သေကြေ၏ (တောလည် ၂၁း၆)။
နောင်တွင် ဣသရေလလူတို့သည် မောအ၏သမီးတို့နှင့် ပြစ်မှားကြသောအခါ ထာ၀ရဘုရား သည် ၂၄၀၀၀သော ဣသရေလတို့အပေါ် တရားစီရင်၍သေစေလေ၏!
တရားသူကြီးမှတ်စာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဣသရေလလူတို့သည် အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် မိမိရန် သူတို့နောက်လိုက်ပါသောကြောင့် ထာ၀ရဘုရားသည် ထိုသူတို့၏အပြစ်ကို တရားစီရင်သည်ကို ကျွန်တော်တို့တွေ့မည်ဖြစ်သည်။ “အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ လက်တော်သို့ကျရောက် ခြင်းအမှုသည် ကြောက်မတ်ဖွယ်သောအမှုဖြစ်သည်” (ဟေဗြဲ၁ဝး၃၁)။ အံ့ဩဖွယ်ကြောက်ရွံ့ဖွယ် သောဘုရားပင်ဖြစ်ပါသည်။
နောင်တွင် ထိုလူမျိုးတို့သည် ဘုရားရှင်ကိုမေ့လျှော့ကြပြီး ရုပ်တု၊ ဆင်းတုများကိုကိုးကွယ် ခဲ့ကြ၍ အပြစ်နှင့်ပြည့်စုံကြလေခဲ့ပြီ။ အတန်တန်သတိပေးခဲ့သော်လည်း၊ မကြာမှီ မြောက်ဘက်ပိုင်း ဣသရေလတိုင်းသည် ကျရှုံးခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ တောင်းပိုင်းယုဒတိုင်းပြည်သည်လည်း ဗါဗုလုန်လက် အောက်သို့ကျရောက်ခဲ့ရသည်။ ယေရုဆလင်မြို့ပြိုကွဲခဲ့ရလေပြီ။ မြို့တံခါးနှင့်အုတ်တံတိုင်းလည်း ပြိုကျခဲ့ရလေပြီ။ မြို့တံခါးလည်း မီးဖြင့်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရလေပြီ။ ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်သည် လည်းပြိုကျခဲ့ရလေပြီ! ထိုထိန်းရခက်သော ဣသရေလလူတို့သည် ဗါဗုလုန်နိူင်ငံသို့ ကျွန်အဖြစ် နှစ်ပေါင်း၇၀ကျွန်ခံခဲရပြီ။ အို! ဣသရေလလူမျိုးတို့ သင်တို့အပေါ် ဘုရားရှင်သည်တရားစီရင်လေပြီ တကား! “ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်သောဘုရားဟူ၍ ကျွန်ခံဘ၀မှ နေဟမိပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။ (နေဟမိ ၁း၅)။ “အလွန်ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်”ဟူ၍ ဒံယေလပြောကြား ခြင်းဖြစ်သည်။ (ဒံယေလ ၉း၄)။
ဘုရားသခင်သည် ကျန်ကြွင်းသော ဣသရေလလူတို့အား နေဟမိနှင့်ဧဇရတို့ခေတ်၌ မိမိတို့ တိုင်းနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဗိမာန်တော် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ယေရှုဘုရား လည်းဖွါးမြင်လာခဲ့ပါပြီ။ မြောက်များသော ဣသရေလလူတို့လည်း ယေရှုဘုရားကိုကယ်တင်ရှင် အပြစ်လက္ခံလာကြပေပြီ။ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဖါရိရှဲတို့သည်ယေရှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။
အေဒီ၇၀ ခုနှစ်၊ ရောမဧကရာဇ်မင်းတိတုသည် ယေရုဆလင်မြို့ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မြို့၌ရှိ လူပေါင်းများစွာအစုလိုက်၊ အပြုံလိုက်သေကြေခဲ့ရကြသည်။ ဂျူးလူမျိုးသမိုင်းပြုစုသူ ယော သပ်ဖပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ၁၁၀၀၀၀၀သော ဂျူလူမျိုးတို့သည် ထိုနေ့၌သေကြေရကြသည်ဟုဆို၏။ ကျန်၅၀၀၀၀သော ဂျူးတို့သည် ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခြင်းခံခဲ့ရကြသည်။ ဗိမာန်တော်ကြီးလည်း မီးလောင်လေပြီ။ ဘုရားသခင်၏လူတို့သည် တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးတို့၌ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ အစ္စရေးနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးမရရှိမှီတိုင်အောင် ပျံနှံ့ခဲ့ရကြသည်။ အိုး! ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်သောဘုရား! အပြစ်ကိုရွှံ့မုန်းပြီး တရားစီရင်သောဘုရား! အစဉ်အမြဲသတိပေးနေသော ထာ၀ရဘုရားဖြစ်သည် “မတရားသော သူတို့နှင့်ဘုရားသခင်ကို မေ့လျှော့သော လူမျိုးအားလုံးတို့သည် မရဏာနိုင်ငံသို့နှင် ခြင်းကိုခံကြရလိမ့်မည်” (ဆာလံ ၉း၁၇)။ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်ဘုရား! ကြီးမြတ်၍အလွန် ကြောက်လန့်ဖွယ်သော အရှင်သခင်ပေတည်း!
မည်သည့်အကြောင်းကိစ္စ၌မဆို ဘုရားသခင်သည်မမှားနိုင်ပေ! သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ “ဘုရားသခင်သည်တရားသဖြင့် စီရင်သောဘုရားဖြစ်၍ မတရားသောသူကို အစဉ်အမျက်ထွက် တော်မူ၏” (ဆာလံ ၇း၁၁)။ သင့်အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ သင်ကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသေးသူဖြစ်ပါက သင်အပေါ်ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် တည်နေမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အ သက်ကယ်တင်ရာ နည်းလမ်းတခုတည်းသာရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည် သားတော်ယေရှုကို သင့်အပြစ်အခအတွက် ကားတိုင်အပေါ်အသေခံစေရန် စေလွှတ်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုkပ်တို့ အားဖြင့် သခင်ကိုအသေသတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်လက်တော်နှင့်ခြေတော်ကို သံမှိုရိုက်ခြင်း၊ နံဘေး တော်ကိုလှံချွန်ုခြင်း ထိုးဖေါက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်၏အစားခံစားရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်နားလည်းပါ သည်! ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်သံမှိုဖြင့် ဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်!
ကားတိုင်ပေါ် ခရစ်တော်အသေခံခြင်းကိုစော်ကား၊ မော်ကားမပြုလိုက်ပါနှင့်! သင့်အပြစ် အစားအသေခံခြင်း၊ သင့်အပြစ်အခအတွက် ဘုရားသခင်အား ကျေနပ်သည့်အထိပေးဆပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် “ငါမူကား၊ လက်ဝါကားတိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော ခရစ်တော်၏အကြောင်း ကို ဟောပြော၏” (၁ကော ၁း၂၃)။ သင်သည် သင့်အပြစ်မှခရစ်တော်သခင်ထံ ပြောင်းလဲပြီး ထိုအရှင်ကို ကိုးစားရပါမည်။ သခင်အသွေးတော်က သင့်အပြစ်ကိုဆေးကြောပါမည်။ “ငါတို့အပြစ်ရှိ သမျှကို ဆေးကြောတော်မူ၏” (၁ယော ၁း၇)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ် သော နေဟမိ၊ ဒံယေလ၊ မောရှေနှင့်ပေါလုတို့၏ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မှ ယေရှုခရစ်၏အသေ ခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြှောက်ခြင်းက သင့်ကိုလွန်မြောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခရစ်တော် သခင်ထံတိုးဝင်ခြင်းမရှိပါက၊ ခရစ်တော်သည် သင့်ကိုယ်စား အသေခံပေးဖြစ်သောကြောင့်၊ ကြီးမြတ် ၍ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်သော ဘုရားသခင်သည် သင့်အားတရားစီရင်ပါလိမ့်မည်။ ထာ၀ရဘုရား၏ အမျက် တော်မှသင့်အား ယေရှုမှတပါး၊ အဘယ်မည်သောသူမှ မကယ်လွတ်နိုင်ပါ။ အခုပင် ယေရှုခရစ်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်စို့!
၁၇၃၁-၁၈၀၀၊ ဝီလျှံခေါပါရေးသားခဲ့သည်မှာ၊ “အသွေးနှင့်ပြည့်သော တွင်းပွင့်ပြီး၊ ဧမာနွေလ၏အသွေး၊ ထိုအသွေး၌ နှစ်မြှပ်သူသည် အပြစ်နှင့်ကင်းစင်လေ” ဟူ၍ သီကုံးရေးသားခဲ့ သည်။ ဤတရားဒေသနာတော်ကို ကျွန်ုပ်မဟောကြားခင်၊ မစ္စတာဂရိဖက်စ် သီဆိုသောဓမ္မသီချင်း သည်ဝီလျှံခေါပါ ရေးသားသီကုံးသော ဓမ္မသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
- အကျွန်ုပ်၏ အသက်တာခရီးလမ်းမြင်သော်
သင့်အပြစ်အတွက် နားလည်သဘောပေါက်ပါရဲ့လား? သင်တယောက်တည်း အထီးကျန်နေ ချိန်တွင် သင့်အပြစ်များက သင့်အား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသလား? ဘုရားသခင်၏အမျက် ဒေါသကို ကြောက်ရွှံ့နေပါသလား? ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်ဖြင့် သင့်အပြစ်များကို ဆေးကြော သန့်စင်ဖို့ ယေရှု၏အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်း ခံလိုပါသလား? ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်သော ဘုရားသ ခင်၏အမျက်တော်မှ ယေရှုခရစ်ထံချဉ်းကပ်ပါမည်လား?
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာခရိတန်အယ်ချန်မှ ယေရမိ ၂၂း၁-၆ အထိကို ဖတ်ကြားပေးပါ သည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင် ခင်ကိတ်ကရိဖစ်မှ ၁၇၃၁-၁၈၀၀ခုနှစ် ဝီလျှံခေါပါ ရေးသားသီကုံးသော “အပြစ်နောင်တ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပါသည်။